Ndeipi mari iri kutanga ecommerce? | ECommerce nhau
Ndeipi mari iri kutanga ecommerce?
Ehezve, panguva ino rimwe remabhizimusi ari kubuda anomiririrwa neecommerce. Asi kunyangwe iri isingadhuri kuzviita uchidzidzira, zvirokwazvo haina pasina mutengo. Kwete zvishoma. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa unganidza kukwana kwemari yakakwana yezvinhu, kuvandudza kambani uye kuwana kune vanotengesa. Uye kuti nyaya yacho inowedzerwa kana paine vashandi mukambani medu.
Sezvinoonekwa, kune nhevedzano yemari inofanirwa kutarisana nenzira isingadzivisike. Zvishoma pane mumakambani epanyama, asi izvo zvinofanirwa kuve zvakagadziriswa mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva. Nzira yakanakisa yekugadzirisa iyi nyaya ndeyekuti uve nemari yakakwana yekudzivirira zvichienderana nedzimwe mhinduro dzinogona kudhura mukufamba kwenguva. Zvese zvemubhadharo zvakaitwa uye zvemari yemubereko inogadzirwa nerudzi urwu rwe chikwereti mashandiro.
Nekuti ichokwadi kuti pakupedzisira nzira chete yatichava nayo ndeyekuenda kumutsara wechikwereti unopihwa nemasangano emari uye echikwereti parizvino. Asi zvakadhura zvakadii isu kusaina kushanda kweaya maitiro? Tichaedza kutsanangura kuti zvikwereti zvinogoneswa sei mumusika uye izvo zvakafanirwa kutanga ecommerce kana zvemagetsi commerce.
1 Mari yezve ecommerce
2 ICO zvikwereti
3 Mari kuburikidza nemabhangi
4 Hurumende uye matunhu rubatsiro
Mari yezve ecommerce
Aya masosi ekubhadhara mari kune vanhu anozivikanwa pamusoro pezvose nekuti hazvinyanyoitika kuti uzviwane mune yazvino kupihwa. Mune chero zviitiko zvacho, unopihwa dzimwe nzira dzinoverengeka dzekuita kuti chikumbiro ichi chishande mukuvandudzwa kwebhizinesi redhijitari, chero zvarakaita uye zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvaunopa kune vatengi kana vashandisi.
Mukati meichi chirevo chizere, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwe une akati wandei sosi yemari. Hapana kana imwe chete sezvaungatenda pakutanga. Kubva kune echinyakare chikwereti mitsara kune chaiwo mamodheru erudzi urwu ebhizinesi redhijitari. Nemamiriro ezvinhu anosiyana zvakanyanya kubva kune imwe kuenda kune mamwe mafomati. Zvese zviri zviviri maererano nezvibereko zvemitero zvinoshandiswa neizvi zvigadzirwa zvemari uye mazwi ekubhadhara uye makomisheni avo kana mari mukutungamira kana kugadzirisa.
Chero zvazvingaitika, isu tiri kuzokupa kubva zvino izvo zviwanikwa zvemari zvaunogona kuenda kunogutsa ichi chehunyanzvi chinodikanwa chauinacho. Uchaona kuti zvimwe zvinechinyakare, asi zvimwe zvinokwezva kutarisisa kwako kwekutanga uye hunyanzvi mukutepfenyura kwavo. Kunyangwe uchinyatsochenjerera mukutaura kwako sezvo njodzi uye zvido zvinofungidzirwa kana uchitsvaga kwazviri zvinowanzova zvinoshungurudza.
Iwo ari echokwadi anonyanya kubatsira kune zvako zvaunofarira pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ndidzo dzinozokubhadharira iyo shoma mari mukudzoka kwavo. Mukati me mitsara yemari inopihwa neHurumende Kiredhiti Kiredhiti, pane imwe yakatsaurirwa chete kune vanozvishandira vashandi kumakambani ari kutanga kwavo bhizinesi basa, mune ino kesi iyo yakatorwa kubva kudhijitari chikamu.
Chinhu chikuru chinokanganisa kunyorera kune aya mamodheru mukubhadhara mari ndechekuti zvinoda kuita zvakafanana zvinodiwa seiyo yechinyakare kubhengi mari. Ndokunge, haugone kuwana mamwe mabhenefiti mukubvumirana kwayo. Kunyangwe pakupedzisira iwe uchizowana yakakwikwidza chikwereti chemari kwauri, zvishoma zvegumi muzana muzana zvakaderera pane kuburikidza neyechinyakare mabhengi zvikwereti.
Mari kuburikidza nemabhangi
Iyo ingangodaro iri nzira yakapusa pane dzese, asi inogona kudhura kupfuura mamwe mafomati mune yakazvimiririra mari. Izvo zvinopesana nazvo, chokwadi chekuti ivo vanozokumbira zvimwe zvinodikanwa: kuratidzwa kweprojekiti, maakaundi ehunyanzvi uye kunyangwe mune zvimwe zviitiko chivimbo chega. Sezvo iwe uchikwanisa kukumbira real estate vimbiso kune yako emagetsi commerce kana imwe pachezvako chivakwa.
Kune rimwe divi, chiyero chemubereko chavanogona kushandisa pane ichi chemari chigadzirwa chinogona kusvika mazinga anosvika 9%. Kune izvi isu tinofanirwa kutarisira kumakomisheni uye mari mukutarisira nekugadzirisa izvo zvinogona kuwedzera mutengo wemutengo wekupedzisira kusvika kune imwezve 3%. Pakati peaya mareti, kudzimwa kwekutanga, subrogation kana kumwe kuita mukati mekiredhiti kara kunoratidzika.
Chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho izwi rekugara kwekirasi iyi yezvikwereti zvinofamba mumatanho anoenda kubva pamwedzi gumi nembiri chete kusvika pamakore gumi. Iko kwaunozove nehurongwa hwekugara uchiisa zvivharo mwedzi wega wega mune yakatarwa-temu yemari yekufarira uye neperesenti yemari isina kubviswa muhuwandu hwehuwandu.
Iyo inosarudzika sarudzo kana iwe uchiziva nzira yekutaurirana nezvako nechikwereti chako institution uye uwane imwe mamiriro ari nani mukuhaya kwako. Uye zvakare, iri zano rinowanikwa kune vese vashoma uye vepakati-vepakati vezvemabhizimusi munharaunda yedigital. Nezvipo zvinokurudzira kwazvo kunyangwe zvichichengetedza nguva mukutepfenyura kwavo.
Imwe nzira ndiyo yakapihwa neasina-bhangi masangano emari uye ayo akabatanidzwa mumapuratifomu emari eCommerce yako. Iwo mamodheru akagadziridzwa kune zvaunoda kunyangwe mukudzoka ivo vanounza zvido zvepamusoro kubva pakutanga.
Imwe yemipiro yavo ndeyekuti havatakure chero mutengo. Zvidimbu chete zvemashoko zvinodiwa kuti udzidze zvakawanda nezve bhizinesi rako. Kusvika pakuti pane imwe nguva kudzoka kwako kungangomiririra dambudziko rinopfuura rimwe.
Hurumende uye matunhu rubatsiro
Kubatsira kwayo kunobva pakuti inopihwa kuburikidza nematanho maviri: padanho renyika nedunhu. Pagore vanopihwa mari zhinji isingadzokere, nemamiriro ekusangana zvakateedzana zvezvinodiwa zvinosiyana zvichienderana nerudzi rwekubatsira kwauchazoda kubva ikozvino. Ndichiri kune rimwe divi, uye sechinhu chitsva, kunewo rubatsiro kune vakadzi mabhizimusi uye kune avo vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu munharaunda dzakazvimiririra, zvisinei nebasa ratangwa.
Muzviitiko zvese, sarudzo yakanakisa ndeyekuzvizivisa pachako nekuda kwemafomati emari, mhando yerubatsiro kana rubatsiro, iwe unogona kutora mukana panguva ino kutanga bhizinesi kana chitoro chemagetsi. Kunyanya kuziva kana inokodzera mukati memabhajeti ako wega kana nyanzvi. Chero zvazvingaitika, inogona kukupa zororo usati wakumbira mutsara wechikwereti kubhangi rako raunogara.
Uyu ndiwo muenzaniso unogutsa kwazvo kune zvako wega uye zvehunyanzvi zvido chero bedzi iwe uchigona kutendeukira kwazviri uye kunyorera kwako kunotenderwa. Nemamiriro ekubvumirana ayo anogara akapfava kupfuura mune mamwe manyuko emari ekushambadzira zvemagetsi. Iko kwauchachengeta mari panguva yekupedzisa basa, zvese mubereko uye mumakomisheni uye mari mukutarisira nekugadzirisa.
Uyu nzira nyowani yemari Yakave iri yekuvandudza fomati yezvose uye zvanyatso kuuya kuzogara panzvimbo yenyika. Ava ndivo vega varimi vega vanoita mari, avo kuburikidza online platform ivo vanopa mari mapurojekiti emarudzi ese, uye kuti mune ino kesi yakachengeterwa zvemadhijitari mapurojekiti kana mabhizinesi. Chero zvayakaita uye maitiro ayo ekutonga. Nekuti pakupera kwezuva zvazviri ndezvekuti iwe une shoma mari yekutsigira chirongwa ichi kubva ikozvino zvichienda mberi.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora kana uchitaura kune izvo zvinonzi kuwanda kwevanhu ndezvekuti zvinokutendera iwe kuti uwane mari nemari shoma kubva pakutanga. Nekuda kwekuti iri yakanyanya mari yekubhadhara kumakambani kana mapurojekiti uye kuti inozivikanwa kupfuura zvese nekuve rakasiyana modhi kubva kune vamwe vese. Iko inokutendera iwe kupa mari nenharaunda yemari usingashandisi kune masevhisi ebhangi kana imwe yechinyakare yemari institution. Uye uko zviripachena njodzi uye zvido zvinofungidzirwa kana uchitsvaga kune ichi chaicho chigadzirwa chemari chinowanzove chisinganyanyo shungurudza.
Makanika ayo anonyanya kubva pachokwadi chekuti vatengesi vanosarudza kana voisa mari kana kwete muchirongwa chako. Ndicho chikonzero nei kazhinji ichiwanika nyore kune makambani asina kunyatso kusimbiswa muchikamu, asi icho mukudzoka chinopa chikuru inovimbisa mukugadzirisa kwayo. Asi iko iko huwandu hwacho hunobva kune vakazvimiririra varimimari uye havatombobva kune chero mhando yevakuru vakuru kana akajairwa masangano.
Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kusimbiswa kuti panogona kunge paine mamwe marongero ekutsigira mari anoenderana nemaitiro akasiyana. Semuenzaniso, dzimwe nzira dzekubhadhara mari dzinopa mukana chaiwo wekuwana capital nemakambani. asina kubhadhara makambani emakwereti iyo inopa zvakavanzika zvakaenzana. Asi muzviitiko zvakawanda pasi pechisimba chimbadzo. Kusvika padanho rekuti vanogona kupfuura makumi maviri muzana mazinga. Kureva kuti ivo ndivo vekare vakweretesi vane zvido zvavo pamuganhu pakubata tichifunga nezvemari iyo yainogona kukupa iwe panguva yakapihwa. Ndicho chinangwa chayo chikuru shure kwezvose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Ndeipi mari iri kutanga ecommerce?
Nzira yekusarudza agency yekufambisa yeecommerce yako?
Chii chinonzi CMO kana Chief Marketing Officer uye ndeapi mabasa avo?